Ukumangalisa ukuKhangela ngokuFanayo: Isihluzi esitsha kwiTikTok | XperimentalHamid
Ukumangalisa ukuKhangela ngokuFanayo: Isihluzi esitsha kwiTikTok
Aprili 15, 2021 by USasha Gohar
Buza nabani na, iifilimu ezibalaseleyo sisiyobisi sobomi phantse kubo bonke. Oku kuyinyani ngakumbi kwisizukulwana seminyaka eliwaka. Abangathi basusa izandla zabo kolu hlobo apho kwawona amaphupha amabi azaliseka.
Ezi bhanyabhanya zinezinye izinto ezininzi ezenza ukuba zikhetheke. Kwelinye bali libali lokoyisa okubi. Ezi ntlobo zemiboniso bhanyabhanya zihambelana kakuhle nabantu. Kungenxa yeso sizathu sokuba ezi bhanyabhanya zenze imali eninzi kwiofisi yebhokisi.
Icebo lokucoca ulwelo olufanayo
Yintoni iMarvel yokuKhangela ngokuFanayo?
Uyifumana njani iFilter ejongeka ngokufanayo?
Ngexesha lokubhala le post, isihluzi esitsha sasisele sithathe iTikTok. Amawakawaka abantu kwiTikTok banezabo iindlela zokuthatha kwesi sihluzo.
Kwabanye esi sihluzo sababonelela ukuba baphile kwifantasy yabo. Yayiyintoni ingcinga entle leyo? Ewe, ukuqala, eli cebo limalunga nabalinganiswa abamangalisayo. Zonke azinanto imfutshane yokuba ngamagorha ngokwawo.
Nangona abantu besazi ngale nto yokuhluza, bathe phithi yiyo. Kule posi, ndiza kuphendula imibuzo embalwa ebalulekileyo enxulumene nesi sihluzo.
Kuqala ndiza kukuxelela ukuba yintoni le icebo lokucoca ulwelo. Okwesibini, ndiza kungena kowona mbuzo ubalulekileyo, Oko kukuthi, ungayisebenzisa njani le filter. Makhe siqale.
Njengoko besenditshilo, iimuvi ezibalaseleyo zezona bhanyabhanya zithandwa kakhulu macala onke. Ezi zibonelela ngezinto ezininzi ezinye iimovie ezingazenzi. Oko kwenza ukuba ezi bhanyabhanya zidume kakhulu.
Njengakwimeko yenkcubeko edumileyo ngokubanzi kunye nokufakwa kwezinye izinto kwi-intanethi, ii-superheroes ziye zaba yinxalenye yeendawo zonxibelelwano. Makhe ndikuxelele ukuba njani.
Icebo lokucoca ulwelo elitsha eliguqulwe ngokufana Marvel lokucoca ulwelo, iiTikTokers bezithelekisa nabanye abalinganiswa beMarvel.
Eyona nto bayenzayo kukuba bathathe iifoto zabo. Kwaye okuseleyo kushiywe kwisihluzi. Eli cebo libaxelela ukuba bajonge kanjani. Akumangalisi oko?
Icebo lokucoca ulwelo olufana noMarvel kungoku nje lisebenzisa i-intanethi, ngakumbi iTikTok. Abantu babelane ngamagorha abo abukeka emangalisa kunye nezimvo kunye nezinto abazithandayo kwezi zithuba zixelela ibali lokuthandwa kwezi zihluzo.
Kodwa abanye abasebenzisi banobunzima ekusetyenzisweni kwesi sihluzo. Ewe, ungakhathazeki ukuba akwenzi njalo. Apha ndiza kukuxelela ukuba ungoyisa njani le conundrum.
Okokuqala, faka usetyenziso lweTikTok kwi-smartphone yakho. Emva kokwenza oko, yiya kwindawo oqhele ukurekhoda kuyo iividiyo. Apha uyafuneka ukuba uphonononge eli cebo lokucoca. Ungayifumana ngokusebenzisa i-Marvel Shapeshifter tag. Oku kuyakuvulela isihluzo ukuba usisebenzise.
Apha ungafunda Ukuqikelela isihluzi seVine kukuphola okutsha
Ngokusebenzisa la manyathelo angentla ungayisebenzisa ngokulula iMarvel Shapeshifter TikTok. Ngendlela, eli lelinye igama lokucoca ulwelo.
Nje ukuba ubeke icebo lokucoca ulwelo kwiposi yakho, ngokuqinisekileyo iya kukukhangela ngohlobo lokuthandwa kunye nezimvo. Mhlawumbi, esi sihluzo sinokukufumanela abalandeli kwakhona? Ngubani owaziyo?
Icebo lokucoca ulwelo olufana noMarvel luyintetho edolophini. Enye indlela elula yokunyusa abalandeli bakho kukuhamba noko abanye besiya kuko.
Kule meko, usebenzisa oku kucoca ulwelo - oluqhubekayo ngoku - unokuba nodumo kwiTikTok. Kule posi, ndikuxelele ukuba yintoni le icebo lokucoca ulwelo. Kwangokunjalo, ndingene nzulu kumanyathelo ekufuneka uwathathe ngaphambi kokusebenzisa le nto. Ndiyathemba ukuba ikuncedile.
iindidi I-Tiktok tags Uyifumana njani iMarvel yokuHluza ngokuFanayo, Yintoni iMarvel yokuKhangela ngokuFanayo Post yokukhangela
Umceli mngeni kaShaolin Monk: Umceli mngeni weVeki eNtsha yeBitlife
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2289 - 2290